Die Qaybo Casting, Aluminum ridaya Die, cuf Casting Part - Focusway
Focusway Aluminum Cast Die
Ningbo Focusway Makiinado Co., Ltd waa dhiman aluminium qaybo shubay iyo adeega alaab-xirfadeed. Waxay bixisaa adeeg OEM one-stop, ka tooling, dhiman ridaya, machining, daaweyn dusha, ilaa kaydinta iyo shixnad. Waxa kale oo ay bixisaa kale oo la xidhiidha wax soo saarka iyo adeegyada sida uu sheegay looga baahan yahay qofka macaamilka ah ee.
heshaan Focusway at Beilun Ningbo, taas oo ah mid ka mid ah salka warshadaha dekedda iyo shubay ugu muhiimsan ee Shiinaha. Shirkadda waxaa la aasaasay sannadkii 2013, degan 13000 ㎡and ayaa 120 shaqaalaha hadda.
Tan iyo markii ay aasaaska, Focusway xajiya sano horumarka degdeg ah by sano on account of waxa awoodda xirfadeed saarka, habdhaqanka shaqada adag, oo lagu qanci karo ...
Ku haboon adeeg one-stop
awoodda Heer OEM
nidaamka tayada adag
Teamworking iyo hawlgalka hufan waa asaanay dhabta ah ee kooxda maamulka this. Xubnaha dhalinyarada da'da celceliska da'da, waxaa ka buuxa hamiday, raad-wanaagga, iyo diyaar u ah inay qaataan masuuliyada.
Dhulku Workshop Daaweynta
tayada Product waa nolosha ee shirkada. Focusway qabsadey muhiimadda ugu weyn ee tayada tan iyo aasaaskeeda, dejinta koox adag QC la tababarka caadiga ah, ka dhisaysa shaybaar ah noocyada kala duwan ee la ogaado, dhismaha nidaamka maaraynta tayada ISO9001 iyo hadda IATF16949 waa in sugida ...
qalab lagu ogaan karo
Preciseness, horumar joogta ah, macaamiisha ugu horeysay.
Isku day inaad sida ugu fiican si ay u hantaan height of brand iyo nolosha.
photo Group ee socdaalka
2016 Xisbiga Year-dhamaadka
2017 xisbiga ee dhammadka sannadka
# 25 Putuoshan Road, Beilun, Ningbo, Zhejiang, Shiinaha 315806
info Guud: + 86-574-86133932